Uhlole izikole umnyango wezokubusa ngobambisana nezindaba zendabuko – Sivubela intuthuko Newspaper
UNgqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zendabuko uSipho Hlomuka uhambele izikole kumasipala wasemakhaya eMzimkhulu ngaphansi kwesifunda I Harry Gwala lapho ahlole khona ukukhishwa kwamanzi nokulwisana ne Covid-19 kulandela ukuvulwa kwezikole.
Ngenyanga edlule umnyango uthumele amathanki amanzi angamashumi amabili nambili (22) , kuziphathimandla zamanzi esifundazwe emizamweni kokuqinisekisa ukuthi izinsiza zamanzi ziyafika emiphakathini nasezikoleni.
Ekuhambeleni kwaNgqongoshe obese dlulela kulezi zikole ezilandelayo:
Emaus High School, Emaus Junior Secondary, Mzokhanyo JSS Kulomkhankaso ebehambisa namalunga esiShayamthetho sesifundazwe umhlonishwa TV Xulu , Mhlonishwa MJ Mazibuko Kanye ne Khansela Nxumalo. Ithimba lihlangane nothisha nhhloko kanye namalungu omkhandlu olawula izikole njengengnxenye yokuhlolwa nokusebenza kwezikole nokulungelwa kwazo ukuqala ukufunda.
uNgqogqoshe unxuse abaphathi bezikole ukuba baqinisekise ukuthi baxhumane nomasipala wesifunda ukuze kuqinisekiswe ukuthi amathanki ahlezi engcwele amanzi.
Umnyango ubenesandla ekulekeleleni izingxongxo phakathi komnyango wezemfundo nomasipala ukuqinisekisa ukuthi izikole zonke zinamanzi anele njengoba kuliwa nokusabalala kobhubhane.